तथ्याङ्कीय प्रकार्यहरू खण्ड चार
ती मीनहरूबाट डेटा बिन्दुहरूको निश्चित डेभिएसनहरूको औसत फर्काउँदछ । डेटा सेटमा ब्यापन प्रदर्शन गर्दछ ।
तर्कहरूको औसत फर्काउँदछ ।
तर्कहरूको औसत फर्काउँदछ । पाठको मान ० हो ।
तर्कहरूको सूचीमा अधिकतम मान फर्काउँदछ ।
=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) ले सूचीबाट सबभन्दा ठूलो मान फर्काउँछ।
=MAX(A1:B100) ले सूचीबाट सबभन्दा ठूलो मान फर्काउँछ।
तर्कहरूको सूचीमा अधिकतम मान फर्काउँदछ । MA को विपरितमा जहाँ तपाईँं पाठ प्रविष्टि गर्नुहुन्छ । पाठको मान ० हुन्छ ।
=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text")ले सूचीबाट सबभन्दा ठूलो मान फर्काउँछ।
=MAXA(A1:B100) सूचीबाट सबैभन्दा ठूलो मान फर्काउँछ।
सङ्ख्याको सेटको मिडियन फर्काउँदछ । सेटमा मानहरूको बिजोर सङ्ख्या समावेश गर्दा मिडियन सेटको बीचको सङ्ख्या हुनेछ । सेटमा मानहरूको जोर सङ्ख्या समावेश गर्दा यो दुई मानहरूको मीन सेटको बीचमा हुनेछ ।
अड नम्बरका लागि : =MEDIAN(1;5;9;20;21) ले ९ मध्य मानको रूपमा फर्काउँछ।
जोर संख्याको लागि: =MEDIAN(1;5;9;20)ले दुईटा मध्यिका मानहरू ५ र ९ को औसत मान फर्काउँछ, त्यो ७ हो।
तर्कहरूको सूचीमा न्यूनतम मान फर्काउँदछ ।
=MIN(A1:B100)ले सूचीमा सबभन्दा सानो मान फर्काउँछ।
तर्कहरूको सूचीमा न्यूनतम मान फर्काउँदछ । जहाँ तपाईँं पाठ प्रविष्टि गराउन पनि सक्नुहुन्छ । पाठको मान ० हो ।
=MINA(1;"Text";20) ले ० फर्काउँछ |
=MINA(A1:B100)ले सूचीमा सबभन्दा सानो मान फर्काउँछ।
डेटा सेटमा जरुरी साझा मान फर्काउँदछ । यदि त्यहाँँ उहीआवृत्ति सहितका पृथक मानहरू भएको खण्डमा यसले सबभन्दा सानो मान फर्काउँदछ । मानको दुवैसँग जोडा मिल्दैन त्रुटिहरू आउँदछन ।
ले एउटा सरणी वा डेटाको दायरामा प्रायः देखा पर्ने, वा दोहोरिने, मान फर्काउँछ। यदि त्यहाँ उस्तै आवृत्तिको साथ धेरै मानहरू छन भने, यसले सबभन्दा सानो मान फर्काउँछ। जब एउटा मान दुई पटक देखा पर्दैन​, त्रुटि आउँछ।
ऋणात्क बायनोमियल वितरण फर्काउँदछ.
X असफल परीक्षणहरूका लागि फर्काइएको मानको प्रतिनीधित्व गर्दछ.
R सफल परीक्षणहरूका लागि फर्काइएका मान प्रस्तुत गर्दछ ।
SP समाधानको सफलताको सम्भाव्यता हो ।
=NEGBINOMDIST(1;1;0.5)ले 0.25 फर्काउँछ।
ले नकारात्मक बायनोमियल घनत्व वा वितरण प्रकार्य फर्काउँछ।
=NEGBINOM.DIST(1;1;0.5;0)ले ०.२५ फर्काउँछ।
=NEGBINOM.DIST(1;1;0.5;1)ले ०.७५ फर्काउँछ।
ले घनत्व प्रकार्य वा सामान्य संचयी वितरण फर्काउँछ।
NORMDIST(सङ्ख्या; मीन; STDEV; C)
सङ्ख्या आधारित वितरण को मान हो जसलाई सामान्य वितरणमा गणना गरिन्छ ।
मीन वितरणको मीन मान हो ।
STDEV वितरणको स्टाण्डर्ड डेभियसन हो ।
C वैकल्पिक हो।C =0ले घनत्व प्रकार्य गणना गर्छ, C = 1 ले वितरण गणना गर्छ।
=NORMDIST(70;63;5;0)ले ०.०३ फर्काउँछ।
=NORMDIST(70;63;5;1)ले ०.९२ फर्काउँछ।
ले सामान्य संचिति वितरणको विपरित फर्काउँदछ।
C =0ले घनत्व प्रकार्य गणना गर्दछ; C = 1 ले वितरण गणना गर्दछ ।
=NORM.DIST(70;63;5;0)ले 0.029945493 फर्काउँछ।
=NORM.DIST(70;63;5;1)ले 0.9192433408 फर्काउँछ।
सामान्य संचिति वितरणको विपरित फर्काउँदछ ।
NORMINV(सङ्ख्या; मीन; STDEV)
सङ्ख्या विपरित सामान्य वितरण निर्धारण गर्नलाई प्रयोग गरेको सम्भाव्यता मान प्रस्तुत गर्दछ ।
मीन सामान्य वितरणमा मीन मान प्रस्तुत गर्दछ ।
STDEV सामान्य वितरणमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रस्तुत गर्दछ ।
=NORMINV(0.9;63;5)ले ६९.४१ फर्काउँछ। यदि मानक विचलन ५ भएको अण्डाको औसत तौल ६३ ग्राम छ भने त्यहाँ ९०% सम्भावना हुनेछ कि अण्डा ६९.४१ ग्राम भन्दा बढी हुने छैन।
ले सामान्य संचयी वितरणको विपरित फर्काउँछ।
=NORM.INV(0.9;63;5)ले 69.4077578277 फर्काउँछ। यदि मानक विचलन ५ भएको अण्डाको औसत तौल ६३ ग्राम छ भने त्यहाँ ९०% सम्भावना हुनेछ कि अण्डा ६९.४१ ग्राम भन्दा बढी हुने छैन।
पियर्सन प्रोडक्ट मोमेन्ट कोरिलेसन कोफिसियन्ट r फर्काउँदछ ।
Data_1 पहिलो डेटा सेटको एरे प्रस्तुत गर्दछ ।
Data_2दोस्रो डेटा सेटको एरे प्रस्तुत गर्दछ ।
=PEARSON(A1:A30;B1:B30)ले दुवै तथ्याड़क संकलनको पियर्सन सहसंबंध गुणांक फर्काउँछ।
ले एरेमा डेटा मानहरूको अल्फा-पर्सेन्टाईल फर्काउँछ। एउटा पर्सेन्टाईलले तथ्याड़क श्रृङ्खलाका लागि मापन मूल्य फर्काउँछ जुन श्रृङ्खलाको सबभन्दा सानो मान (अल्फा=०) देखि सबभन्दा ठूलो मान (अल्फा=१) सम्म जान्छ। अल्फा = २५% का लागि पर्सेनटाईल भनेको पहिलो क्वाट्रायल हो; अल्फा = ५०% का लागि मध्यिका हो।
मितिमितिको एरे प्रस्तुत गर्दछ ।
अल्फा ० र १ बीचको मापन प्रतिशत प्रस्तुत गर्दछ ।
=PERCENTILE(A1:A50;0.1)ले तथ्याड़क संकलनमा मान प्रस्तुत गर्छ जसले A1:A50 मा जम्मा तथ्याड़क मापनको १०% बराबर गर्छ।
=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%)ले तथ्यांक संकलनमा मान प्रस्तुत गर्छ जसले A1:A50 मा जम्मा तथ्यांक मापनको १०% बराबर गर्छ।
ले एरेमा तथ्यांक मानहरूको अल्फा-पर्सेन्टाईल फर्काउँछ। एउटा पर्सेन्टाईलले डेटा श्रृङ्खलाका लागि मापन मूल्य फर्काउँछ जुन श्रृङ्खलाको सबभन्दा सानो मान (अल्फा=०) देखि सबभन्दा ठूलो मान (अल्फा=१) सम्म जान्छ। अल्फा = २५% का लागि पर्सेनटाईल भनेको पहिलो क्वाट्रायल हो; अल्फा = ५०% का लागि मध्यिका हो।
=PERCENTILE.INC(A1:A50;0.1)ले तथ्यांक संकलनमा मान प्रस्तुत गर्छ जसले A1:A50 मा जम्मा तथ्यांक मापनको १०% बराबर गर्छ।
नमूनामा मानको प्रतिशत दर्जा फर्काउँदछ ।
डेटा ले नमूनामा डेटाको एरे प्रतिनीधित्व गर्दछ ।
मानमान प्रस्तुत गर्दछ जसको पर्सेनटाईल दर्जा निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ ।
=PERCENTRANK(A1:A50;50)ले A1:A50 मा भेटाएका सबैमानहरूको जम्मा दायराबाट मान ५० को प्रतिशत श्रेणी फर्काउँछ। यदि जम्मा दायराको बाहिर पटि ५० खसेको खण्डमा त्रुटि सन्देश देखा पर्नेछ।
=PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50)ले A1:A50 मा भेटाएका सबैमानहरूको जम्मा दायराबाट मान ५० को प्रतिशत श्रेणी फर्काउँछ। यदि जम्मा दायराको बाहिर पटि ५० खसेको खण्डमा त्रुटि सन्देश देखा पर्नेछ।
=PERCENTRANK.INC(A1:A50;50)ले A1:A50 मा भेटाएका सबैमानहरूको जम्मा दायराबाट मान ५० को प्रतिशत श्रेणी फर्काउँछ। यदि जम्मा दायराको बाहिर पटि ५० खसेको खण्डमा त्रुटि सन्देश देखा पर्नेछ।
मानक सामान्य वितरणका लागि वितरण प्रकार्यको मानहरू फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या आधारित मान हो जसलाई मानक सामान्य वितरणमा गणना गरिन्छ ।
=PHI(2.25) = ०.०३
=PHI(-2.25) = ०.०३
=PHI(0) = ०.४
प्यासन वितरण फर्काउँदछ ।
POISSON(सङ्ख्या; मीन; C)
सङ्ख्याआधारभूत मान प्रस्तुत गर्दछ जसलाई प्यासन वितरण गणना गरिन्छ ।
मीनप्यासन वितरणको मध्यम मान प्रस्तुत गर्दछ ।
=POISSON(60;50;1)ले ०.९३ फर्काउँछ।
ले पोइसन् वितरण फर्काउँछ।
=POISSON.DIST(60;50;1)ले 0.9278398202 फर्काउँछ।
डेटा सेटको क्वार्टायल फर्काउँदछ ।
प्रकार क्वार्टायलको प्रकार प्रस्तुत गर्दछ । (0 = MIN, 1 = 25%,2= 50% (MEDIAN),3= 75% and4= MAX.)
ले डेटा सेटको क्वार्टायल फर्काउँदछ।
Title is: तथ्याङ्कीय प्रकार्यहरू खण्ड चार